FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA COCKAPOO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Cockapoo
Alika mpihetsiketsika Spaniel / Poodle mifangaro
Milo the Maxi Cockapoo (Cocker Spaniel / Standard Poodle mix dog). Alika fanompoana voaofana izy.
Lisitry ny alika mitambatra Cockapoo
Tsy alika madio ny Cockapoo. Lakroa misy eo anelanelan'ny Cocker Spaniel ary ny Poodle . Matetika izy io no maniry a Toy Poodle na a Poodle kely . Rehefa Spaniel Cocker dia nompana a Poodle mahazatra antsoina hoe Maxi Cockapoo izy io. Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro . Fanamarihana: ny klioban'ny Cockapoo sasany dia miasa amin'ny fanaovana ny Cockapoo ho alika madio amin'ny alàlan'ny fiampitana andian-taranaka maro, raha ny mpiompy hafa kosa mifikitra amin'ny fangaro Poodle / Cocker fototra, milaza fa te hitahiry ny heterosis vokany amin'ny fifangaroan'ny hybrid. Anontanio ny mpiompy izay ifandraisanao amin'ny karazana Cockapoo ampiakarin'izy ireo.
Milanja: Kilalao Teacup - ambanin'ny 3 kilao (lanjany)
Kilalao - ambanin'ny 5 kilao (5 kg.)
Miniature / Mini - 13 hatramin'ny 18 pounds (5,5 - 8 kg.)
Maxi - mihoatra ny 19 pounds. (9 kg.)
Hahavony: 14-15 santimetatra (35-38 cm.)
lucas terrier puppy amidy
Salanisan'ny 16 taona
ACC = Club Cockapoo Amerikanina
CCGB = Club Cockapoo an'ny GB
NACR = Registra Cockapoo Amerikana Avaratra
Drafitra mpamorona endrika = Cock A Poo
Mpanoratra International Canine Registry®= Cockapoo
Matty the Cockapoo (Cocker Spaniel / Poodle mix) amin'ny 2 1/2 taona— 'Betsaka ny toerana mamela ny alika hiditra sy hankafy ny andro iraisana amin'ny tompony fa tsy hijanona ao an-trano tontolo andro…. Matty dia nanana fotoana nahafinaritra sy fiantsenana mampihetsi-po be tao Athleta. '
'Ity dia Shadow, lehilahy Cock-a-poo amin'ny faha-10 taonantsika. Noraisinay i Shadow tamin'ny fialofana tamin'ny taona 2 taona. Hitanay fa nanana izy androbe 2 herinandro aorian'ny nananganany azy. Ny toe-pahasalamany dia azo tanterahina amin'ny medikaly isan'andro tsy lafo ary izy no ALOHA TSARA INDRINDRA! 15 taona izy izao ary mbola mandaka na dia miadana aza. Mpitia izy ary a amboa lap . Izay rehetra nifanena tamin'i Shadow dia te hitondra azy mody. Raha mitady namana ianao, dia safidy tsara ny Cockapoo. Shadow no mpihaza faha-2 ahy. Ny CAP voalohany dia velona hatramin'ny 16 taona. Alika mahafinaritra ihany koa izy, na dia tsy nitaky 'fotoana fohy' toa an'i Shadow aza. Haingana dia haingana fiaran-dalamby (mianatra mipetraka, miteny, mihodina ary mijanona ao anatin'ny andro vitsivitsy). Izahay mihitsy no nampiofana azy. Nahafinaritra azy ny zanako fony izy ireo mbola kely ary tena nanaiky olona rehefa niditra tao an-trano (rehefa avy nihanakaty sasany). Ny kalitao tsara indrindra hitako tao amin'ny CAP's-ko dia tsy chewers lehibe izy ireo fa tsy ratsy toetra. Tsy nody tany an-trano mihitsy aho fa nahita kiraro simba, na kojakoja na fako azo noravana. Sanatria. Samy nahavita ny trano feno ny sambon'ny CAP ary tsy voadona mihitsy. '
border collie alemana shorthair mix
'Mocha, aseho eto mandritra ny 2 ½ taona dia vehivavy Cockapoo misy palitao somary mikotrana. Scooby, aseho eto amin'ny 1 ½ taona dia lehilahy volo olioly. Mamirapiratra, be fitiavana ary tia olona izy ireo. Samy navotana izy ireo ary nitombo ho biby fiompy tsara fitondran-tena, ara-tsosialy ary tena tiana. '
Daisy ilay alika kely Cockapoo mainty sy fotsy amin'ny 6 herinandro - Poodle ny reniny ary Spaniel Cocker Spaniel ny rainy.
'Ity i Emily, ny Cockapoo anao amin'ny faha-3 taonany. Mahafinaritra izy, mankatò tokoa. Tiany ny saka sy alika hafa ao amin'ny fianakaviana, sy ny ankizy, 9 sy 4 taona. Somary marokoroko ny palitaony. Ataoko fohy izany. Ankafiziny mandeha sy ny mitaingina fiara. Tiany ny mijery ny ankizy milalao eo amin'ny kianja filalaovana eo akaiky eo. Izy dia mpiambina tsara ary mampandre ahy amin'izay tabataba tsy fantany. Mijery ny Dog Whisperer aho, mamaky ny bokiny ary manaraka ny fombany amin'ny mpitarika kitapo. Niara-niasa tamin'ny alikako rehetra izy, anisan'izany ny Mini Poodle SY Sheltie . Ny teknika tsara indrindra nianarako dia ny fitakiana fananana amin'ny entana. Ny alikako dia tsy mifehy entana ary hamela ny entana tadiaviko azy ireo. Tantara hafa ny saka! Fonenana 'manolo-tena milamina' isika.
yorkie Cocker spaniel afangaro alika kely
Doodle ny alika kely Cockapoo amin'ny 5 volana miaraka aminy pacifier kilalao .
'Chewy dia hazo fijaliana anelanelan'ny Spaniel Cocker amerikana ary a sôkôla Standard Poodle , antsoina hoe a Maxi Cockapoo . 5 ½ volana izy ary efa 20 santimetatra ny halavany (hatramin'ny tampon'ny loha ka hatramin'ny gorodona) ary milanja 25 pounds eo ho eo. Nanomboka fotsy izy, saingy rehefa nanomboka niditra ny palitao olon-dehibe dia namolavola ity loko apricot ity izy. '
'Ity i Bubba, ny Cockapoo maso manga, mifangaro Miniature Poodle / American Cocker Spaniel mix, ary ny alika faha-5 ahy. Tena zavaboary mahatalanjona izy, ary manan-tsaina indrindra. Mahafantatra fika isan-karazany izy ary mianatra samirery zavatra. Ohatra, izy dia nianatra nanokatra ny varavaran'ny lamba fikorisa tamin'ny alàlan'ny fanosehana ny orony tao anaty triatra, ary afaka manokatra ny varavarana rehetra ao an-trano raha avela somary mangadihady izy ireo. Bubba dia mahafinaritra sy mahafinaritra ary mahafinaritra ny olon-drehetra. '
'Waffles dia alika mahafinaritra. Izy dia mifangaro eo amin'ny Cocker Spaniel sy Poodle. Tsy mivoraka izy (izay tsara raha mipetraka amin'ny trano ianao) ary kely fotsiny no alefany. Manantena alika tsy mandatsaka tanteraka izahay, fa manana toetra tsara maro hafa izy, dia haka volo vitsivitsy etsy sy eroa. '
Phantom the Cockapoo tamin'ny faha-11 taonany taorinan'ny taovolony vaovao (tapa-jaza)
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Cockapoo
Sary Cockapoo 1
Sary Cockapoo 2
Sary Cockapoo 3
Sary Cockapoo 4
greyhound italianina mainty sy fotsy
antsasaky ny frantsay bulldog antsasaky ny boston terrier
west Highland terrier fotsy Mix
bullmastiff sy laboratoara afangaro alika kely
alika kely leavitt bulldog amidy
yorkie shih tzu mifangaro mpiompy